छालालाई चम्किलो बनाउँने बदमका अचुक फाइदाहरु । जानिराख्नुहोस् - Nawalpur Dainik
छालालाई चम्किलो बनाउँने बदमका अचुक फाइदाहरु । जानिराख्नुहोस्
काठमाडौ बदम स्वादका लागि मात्र नभई सवास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो एउटा कन्दमुल हो । बदामको सेवन गर्नाले स्वास्थमा धेरै फाइदा हुन्छ । यसलाई हरेक दिन एक मुठी खाएमा मुटु रोगदेखि क्यान्सरसम्मका रोगहरूको जोखिम न्युनिकरण गर्दछ ।
बदामले मधुमेहबाट पनि जोगाउन सहयोग गर्छ। बदाममा पाइने म्याग्नेसियमले शरीरमा उचित मात्रामा ब्लड सुगरको तह कायम राख्न सघाउँछ। बदाममा हुने ‘मोनोस्याचुरेटेड फ्याट्स’ र ‘रिजर्भेट्रोल’ तत्वले छालालाई चम्किलो बनाउँछ। यसमा पाइने पोषणयुक्त फाइबरले छालामा हुने अत्यधिक तेललाई निकालेर छालालाई नरम बनाउँछ गर्भवती र शिशुलाई फाइदाः बदाममा हुने फोलिक एसिडले न्युरल ट्युब डिफेक्टस भएको शिशुलाई फाइदा पुर्याउँछ। तसर्थ, गर्भाधारणको सुरुदेखि नै यस्ता समस्याबाट बच्न महिलाले बदाम खानुपर्छ।
यो पनी पढ्नुहोस्ः मकै खानुका फाइदा यस्ता छन्- क्यान्सरको खतरा समेत कम हुन्छ
मकैमा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र फ्लेवेनाइड तत्वका कारण क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोगको खतरा पनि कम हुन्छ । यसका साथै यसले फ्रि रेडिकल्सबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउँछ । मकैमा पाइने फेरुलिक एसिड, स्तन र कलेजोको ट्युमरको आकारलाई पनि कम गर्नमा सहयोग गर्दछ । हड्डीलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईं दुध र भिटामिन डी को सेवन गर्नुहुन्छ । तर तपाईंलाई थाहा नहोला, मकैमा पाइने जिंक, फोस्फरस, म्याग्नेसियम र आइरनले हड्डीलाई बलियो बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । यसका साथै यसले बाथ रोगको सम्भावना पनि कम गर्दछ ।
Prevगुडियाझैँ देखिने नायिका ‘जसिता गुरुङ’ १५ तस्वीरमा हेर्नुहोस्
Nextकिन दुख्छ कम्मर ? यसबाट कसरी छुटकारा दिलाउने? यस्तो छ उपचार विधि